Esi eji akwa akwa Ịtali?
Italy - ebe omuma nke ejiji, ma elu, ma n'okporo ámá na kwa ubochi, obughi ihe nzuzo. Ụdị ejiji nke Ịtali bụ ọkọlọtọ ọ bụghị naanị maka ndị inyom Europe nile, mana maka ụwa dum. Ụdị ejiji a na-ejikọta ọ bụghị naanị nhazighachi na ịdị mma, kama nnwere onwe - ma mmụọ na ije. Ọ bụrụ na ị na-aga n'okporo ámá nke obodo Ịtali, ị ga-ahụrịrị nke a. Ọ ga-adị ka uwe nke onye Ịtali na-ahụkarị dị mfe dịka o kwere mee, dị mfe na n'efu, ma ọ dị mma n'anya, dịka a ga - asị na nwaanyị a nwere onye na - ahụ onwe ya. Ọmụmụ sayensị nke esi eji ejiji Ịtali na-adị mfe nghọta, ọ dịghịkwa mkpa inwe ego iji nweta ego dị oké ọnụ ahịa na uwe ndị na-emepụta ihe dị ukwuu.
Ụdị oge dị iche iche
Olee otú ejiji ndị Ịtali na ọdịda? Ikekwe, nke a bụ oge nke afọ, ma e wezụga mmiri, mgbe ịke n'okporo ámá Ịtali na-agba agba na agba agba. Ihe a ga-ahụ ngwa ngwa bụ ihe bara uru nke uwe. Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-enweghị akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ (ụbịa Ịtali na-adị ọkụ karịa nke anyị), uwe ejiji ejiji na uwe, jaket na ngwa ngwa, n'enweghị ebe ọ bụla - gloves, scarves, scarves, bags.
Na otu esi eji ejiji ndị Ịtali n'oge okpomọkụ, ị nwekwara ike ikpe ikpe, na-ele ndị obodo nkịtị anya. Ndị Ịtali - otu n'ime mba ndị kacha nwee mmekọahụ, otú ahụ ka ọ dị n'oge ọkọchị, ihe ngosi a na-egosi onwe ya na akwa. N'ebe a, na obere obere mkpụmkpụ, na imeghe sara mbara na ọnụ ọgụgụ nke ogologo ogologo, na elu na elu igwe. Akpụkpọ ụkwụ, dị ka a na-achị, na-enweghị ikiri ụkwụ, n'oge okpomọkụ, ọ na-abụkarị akpụkpọ ụkwụ si n'úkwù.
Iji dokwuo anya n 'ikpeazu nke eserese nke Italia, ọ na - anọgide na - achọpụta otú e si eji ejiji ndị Ịtali n'oge oyi. Ugwu elu igwe na ebe a abughi nani ihe bara uru, kamakwa o di nma. Enwu na akpụkpọ anụ dị ezigbo mma. Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-enweghịkwa ụkwụ, ma ọ bụghị ịdị mma na ejiji.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ndị sayensị nke esi eji ejiji ejiji ndị Ịtali dị mfe. Ihe kachasị mma bụ ihe kachasị mma na ihe dị mma na mma, mmekọahụ na ihe dị mma.
Ejiji - Mgbụsị akwụkwọ 2015
Swarovski Rhinestones maka Nails
Ụcha varnish maka pedicure 2015
Akpụkpọ ụkwụ - Winter 2016-2017
Ejiri akwa jaket 2016
Ịkpụ aka na pastel agba - 42 foto nke mara mma pastel manicure maka ọ bụla uto
Uwe ejiji ụmụ nwanyị - Ejiji 2016
Ebube ejiji 2016
Agụmakị Mgbụsị akwụkwọ 2017 - ejiji ejiji, akwụkwọ akụkọ, usoro
Ebube ntu ntu 2014
Akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị
Akpụkpọ ụkwụ na-adịghị mma
Ejiji mara mma 2017 na njikọta ugbu a
Uwe ejiji na ngụsị akwụkwọ 2017 - ụdị ejiji kacha mma na ejiji
Ihe mgbaàmà nke nkụchi obi na ụmụ nwanyị
Ogige ntụrụndụ mba New Zealand
Oghere facade maka osisi
Viburkol - kandụl maka ụmụaka
Ngwọrọgwu ụmụ maka ntutu ntutu - Ezi ntụziaka maka nkpuchi kachasị mma
Uwe akwa jaket - onye na-aga na ihe ị ga-eji akwa jaket na uwe elu ya?
Achọpụta mbụ n'ime nkịta
Ụkwụ a zụrụ mkpọrọgwụ - ihe ị ga-eme?
Candied mkpụrụ si aronia
Cucumbers na Adjika maka oyi - ntụziaka
Miranda Kerr gosiri mgbanaka aka
Nwe ime ntughari 2015
Obere akpụkpọ ụkwụ
Ntugharị - uzommeputa
Uche na ahụ bụ aja aja na agba
Ntụziaka azu na Tatar
Eziokwu niile gbasara mpempe aka
Nri iri nri na otutu
Ntuziaka maka shish kebab - echiche kachasị mma maka ịkụ anụ, akwụkwọ nri na azụ na nchara
Courtney Cox zukọtara ndị enyi ya na egwu egwu egwu ROCK4EB!
Ihe ịrịba ama nke nsí